Macnaheedu waa maxay? - BBC News Somali
Macnaheedu waa maxay?
3 Juunyo 2010
Bog kasta ee website-ka BBC Somali waxaa hadda ku lifaaqan astaamo la xiriira Suntashada bogaga bulshada ilaa la wadaagidda boggaga internet-ka. Waxaa kuwan laga heli karaa meesha ugu hoosaysa sheeko walba ama bogaga (AV) maqalka iyo muuqaalka.
Boggagan waxay kuu ogolaanayaan in aad kaydsato, cid kale ku darto in ay helaan ama aad u dirgo adigoo isticmaalaya sumadahan, waxaad u diri kartaa saaxiibada iyo dadka aad isku danta noqon kartaan. Waxaa kaloo aad ka gali kartaa sumadahan computer-ka kasta ee aad isticmaalayso.
Sidaa darteed, hadii aad la kulanto sheeko BBC aad xiisaynayso, oo aad doonayso in aad kaydiso si mustaqbalka aad u isticmaasho ama aad cid kale u dirto, dhag sii mid ka mid ah Sumadahan si aad ugu darsato liiskaaga.
Dhamaan boggagan waa lacag la'aan adeegsigooda balse waxay u baahan yihiin in aad is qorto. Marka aad is qorto waxaad bilaabi kartaa in aad sumad u yeelato wixii aad doonayso.
Bog kasta si ka yara duwan kan kale ayuu u shaqeeyaa, marka isticmaal Sumadaha hoose si aad u ogaato adeega ugu haboon baahidda aad qabto.
Waxaad ka heli kartaa faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta Suntashada bulshada (Social Bookmarking) oo English ku qoran en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking